Isigqumathelo se-Nebulizer, imaski ye-Oxygen, i-Nasal oxygen cannula-Bornun
Inkqubo yokutsala inikezela ngokuqokelelwa kolwelo olukhuselekileyo noluthembekileyo kuyo yonke imisebenzi kunye neendawo zononophelo lwempilo. Iingxowa zokutsala ziyafumaneka nge-1000ml kunye ne-2000ml ubukhulu. Zenziwe ngefilimu ye-polyethylene encinci kodwa yomelele, eyenza inkqubo ikhuseleke, isempilweni kwaye yomelele.
I-Nasal Oxygen Cannula-ithiphu ethambileyo
I-Oxygen i-oksijeni ye-Nasal
Uhlobo lweTrackotomy Mask
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. inxaxheba kuphando isixhobo zonyango, ukwenziwa kunye nentengiso. Iqela le-R & D elikhokelwa yi-MD kunye neenjineli eziphezulu zihambelana nokujolisa kwintengiso, isayensi kunye netekhnoloji njengesikhokelo, zihlala ziphuhlisa iimveliso zobuchwephesha. Ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zokuphefumla, i-anesthesiology kunye neeklinikhi ezingxamisekileyo.